Programmer တစ်ယောက်အဖြစ် ဂျပန်ရောက်ပြီး တစ်လအကြာ - A Programmer
A Programmer, 10 months ago32 min read 1536
Nov 10 ရက်နေ့ ကျနော် ဂျပန်ရောက်တာတစ်လပြည့်ပါပြီ။ ရန်ကုန်ကနေပြီး ဒီရောက်တဲ့အထိ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာတွေနဲ့ ဒီမှာရှိတဲ့အချိန်ကြုံတေ့ွ ရတာတွေကို ဒီ article ကနေတစ်ဆင့် sharing ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာများသောအားဖြင့် အလုပ်လုပ်ချင်တယ်ဆို agent ကနေတစ်ဆင့် Join ကျရတာများပါတယ်။ တစ်ချို့ japan company တွေကလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ training class လာဖွင့်ပြီး Japan ကိုပို့ကျပါတယ်။ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုက ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး Japan က Job site တွေမှာ apply လုပ်တာပါ။ ဂျပန်မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ 90 percent company က ဂျပန်စကား ပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်၊ English လိုပြောတဲ့ company ရှိပေမဲ့ အင်မတန်ရှားပါတယ်။
ဆိုတော့ ဒီနေရာမှာ agent နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်၊ myanmar company ကနေ ဂျပန်company ကိုတိုက်ရိုက် တွေက COE တို့ စာရွက်စာတမ်း case တွေမှာအေးဆေးပါပဲ၊ ကိုယ်က ထိုင်စောင့်နေရုံပါပဲ။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ရှာတဲ့ နေရာမှာတော့ အလုပ်ရဖို့လဲခဲယဉ်းတဲ့အပြင် ရခဲ့ရင်လည်း စာရွက်စာတမ်းပိုင်းတွေကိုယ်တစ်ယောက်တည်းလုပ်ရဖို့များပါတယ်။ ကောင်းတာကကျကိုယ့်ဘာသာ ရှာထားတဲ့ company တွေမှာ အလုပ်ရသွားခဲ့ရင် လစာက ပုံမှန် ဒီက agent တွေကနေတစ်ဆင့်သွားတာထက်ပိုများပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Japan ရဲ့ programmer salary range က junior တွေအတွက်ဆို yen 2သိန်းခွဲကနေပြီးတော့ ၃သိန်းအထက်ပတ်ဝန်းကျင်ရပါတယ်။ senior တွေအတွက်ဆို yen 4သိန်းနဲ့အထက် ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Myanmar ကနေ agent တို့ company တို့တစ်ဆင့်ခံပြီးလာတဲ့လူတွေဆို များသောအားဖြင့် က yen 2သိန်းကျော်လောက်စရပါတယ်။ entry level ကစပေးတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ရှာပြီး apply လုပ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ Japan ရဲ့ salary rate ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းလောက်ရပါတယ်။ ဒါကျနော်သိသလောက် data တွေနဲ့ average ပြောထားတာပါ၊ ကွာခြားချက်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။
ကျနော် အလုပ်ရှာတဲ့အချိန်မှာသုံးခဲ့တဲ့ website တစ်ချို့ ကိုအောက်မှာရေးပေးထားပါတယ်။
အလုပ်ရသွားပြီး offer letter ရပြီဆို COE (နေထိုင်ခွင့်) အတွက်ဆက်လုပ်ပါတယ်။ COE ရပြီဆိုရင်တော့ဖြင့် Japan သံရုံးမှာ visa လျှောက်ပြီးလာလို့ရပါတယ်။ အလုပ်ရှာတဲ့အကြောင်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ Japan မှာနေထိုင်တဲ့အကြောင်း ဆက်ပြောပါမယ်။
အားလုံးသိထားလောက်ကျမယ့်အတိုင်းအခွန်ကတော့ လစာ2သိန်းကျော်ရတဲ့သူဆို ၃၅၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြတ်ပါတယ်။ စားစရိတ်ကတော့ ၃၀၀၀၀ လောက်ကုန်တယ်ပြောပေမဲ့ ကျနော်ကတော့ ကိုယ့်ဘာသာချက်စားလို့လားမသိ တစ်လ ၁၅၀၀၀ လောက်ပဲကုန်ပါတယ်။ may be သရေစာလည်းသိပ်မစားတာကြောင့်ပါမယ်ထင်ပါတယ်။ wifi တပ်မယ်ဆို ၄၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကုန်ပါတယ်။ sim card internet ကတော့ ဈေးကြီးတယ်၊ 3GB ကို ၃၀၀၀ လောက်ရှိမယ်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကတော့ အဆင်ပြေတယ်။ တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ဆို နေသားကျသွားပြီး သွားတတ်လာတတ်ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ကျနော်အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလာပါပြီ။ များသောအားဖြင့် ကျနော်တို့သိထားကျတာက Japan က နည်းပညာနဲ့ပတ်သတ်ရင် old school ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိထားကျပါမယ်၊ မဟုတ်ပါဘူး၊ well 50 50 လို့ပြောရမလား၊ percentage တော့ ကျနော်ကောင်းကောင်းမသိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ tech stack အလွန်ကောင်းတဲ့ company တွေ ဒုနဲ့ဒေးရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာတင် enterprise products အကောင်းစားတွေရေးတဲ့ company တွေ၊ AR VR AI အစရှိတဲ့ technology တွေကို catch up လုပ်နေတဲ့ company တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက သူတို့ဆီကလူတွေ senior level ဆိုတစ်ကယ်တော်ကျပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းကို responsibility အများကြီးယူထားနိုင်ကျတယ်၊ ကျနော့် company မှာလုပ်တဲ့ senior တစ်ယောက်ဆို web , android, ios , devops သူတစ်ယောက်တည်းရေးပါတယ်၊ senior level ပါ၊ CTO မဟုတ်သေးပါဘူး။ CTO တွေဆို တစ်ကယ်အားကျရလောက်အောင်တော်ကျပါတယ်။ တော်ကျဆို သူတို့ဆီမှာ ဘာနည်းပညာဖြစ်ဖြစ် japan ဘာသာစကားနဲ့ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ Japan ဘာသာစကားရဲ့ contribution က ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆို beginner level ကနေ CTO level အထိကို Japan ဘာသာစကားနဲ့လေ့လာသွားလို့ရလောက်တဲ့အထိ ကောင်းပါတယ်။
ကံဆိုးတာတစ်ခုက agent တို့ company တို့ကနေတစ်ဆင့်သွားမယ်ဆို tech stack ကောင်းတဲ့ company တော့ရဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖတ်က ကြည့်ပြန်ရင်လည်း japan ကိုဝင်ဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းက ဒါပဲရှိပါတယ်။
Recommend လုပ်ချင်တာကတော့ agent နဲ့တစ်ဆင့်ခံပြီး လာမယ်၊ company ကောင်းကောင်းလည်းရမယ်ဆို လှည့်ကြည့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်က old school company တွေမကြိုက်ဘူး၊ tech stack modernized ဖြစ်တာတွေကြိုက်တယ်ဆို နှစ်နည်းရှိပါတယ်၊ တစ်နည်းက ကိုယ့်ဘာသာရှာပါ (ခက်ခဲပါတယ်)။
နောက်တစ်နည်းက agent နဲ့ လာပြီးရတဲ့ company မှာအရင်လုပ်ပြီး တစ်နှစ်တန်သည် နှစ်နှစ်တန်သည်ကြာပြီးရင် အလုပ်ပြောင်းပါ။ (အချိန်ရင်းရပါမယ်)။
Everyone, Goodluck with your hunting jobs in Japan !
Really appreciate your articles. Thank you, brother.
Japan visa အတွက်ကရော medical check up တွေလိုအပ်လားဗျ ကျွန်တော်က bပိုးရှိတော့ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ် လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ အကို့တုန်းကရော ဘယ်လိုလဲဗျ သိချင်လို့ပြောပြပေးပါဗျ
3 weeks ago0388